Amafulethi e-Biss Sydney - I-Airbnb
Amafulethi e-Biss Sydney
Poznań, wielkopolskie, i-Poland
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Beata
I-Sydney Apartment iyi-34 m2 yokunethezeka nokusebenza. Yesimanje kodwa ethokomele futhi esebenzayo.
Kukhona: igumbi lokulala elihlukile, igumbi lokuphumula eline-TV kanye nombhede we-sofa onethezekile lapho abantu abangu-2 bengalala khona; ikhishi elinomshini wokuwasha izitsha, itafula lapho ningadla khona ndawonye, noma nilungise uhlelo lohambo noma umsebenzi; indlu yokugezela eneshawa nesibuko esikhulu. Ukwengeza ezivakashini: umshini wokuwasha, insimbi, i-ironing board, isomisi sezinwele, umenzi wekhofi, iketela, umsakazo, ikhofi, itiye.
Ifulethi litholakala esitezi sesibili sendlu eqashisayo enkabeni ye-Poznań, amamitha ayi-100 nje ukusuka e-Old Market Square kanye namamitha angama-950 kuphela ukusuka eStary Browar. I-Poznań International Fair itholakala endaweni engaba ngu-2 km ukusuka lapho sihlala khona.
Indawo yefulethi iqinisekisa ukusebenza ngokunethezeka nokwazi idolobha; ukufinyelela okulula nokusheshayo kumaphuzu ebhizinisi abaluleke kakhulu kanye nezindawo eziheha kakhulu zase-Poznań.
I-Bliss Apartment -ISydney yindawo yakho enkabeni ye-Poznan, kungakhathaliseki ukuthi inhloso kanye nobude bokuhlala.
Izivakashi zingasebenzisa: umshini wokuwasha, umshini wokuwasha izitsha, ama-ayina, amabhodi oku-ayina, okomisa izinwele, igedlela likagesi, umenzi wekhofi, izibuko kanye nesivuli sewayini, imidlalo yebhodi yezingane.
4.99 · 127 okushiwo abanye
Ifulethi litholakala enkabeni yeDolobha Elidala - amamitha ayi-100 ukusuka e-Old Market. Kunenqwaba yamathilomu, izindawo zokudlela kanye nezindawo eziheha izivakashi endaweni.
Izivakashi zingabhala i-imeyili nganoma yisiphi isikhathi ku-: kontakt@blissapartments.pl noma shayela izinombolo zocingo ezilandelayo: +48 509 572 853 noma +48 602 22 55 12. Uma ukuba khona kwethu kudingekile, sizovela efulethini phakathi nemizuzu engu-45 .
Izivakashi zingabhala i-imeyili nganoma yisiphi isikhathi ku-: kontakt@blissapartments.pl noma shayela izinombolo zocingo ezilandelayo: +48 509 572 853 noma +48 602 22 55 12. Uma u…
Hlola ezinye izinketho ezise- Poznań namaphethelo